सेटिङ TOMRA 3A ले उच्च गुणवत्ता आलु उत्पादकको उत्पादकता र दक्षता - आलु प्रणाली बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ
एक अत्यधिक कुशल छँटाई प्लान्ट को उपयोग गरेर टम्रा3ए डचेमिन कम्पनी (क्यान) ले यसको उत्पादनहरूको उच्च गुणवत्ता प्राप्त गर्दछ।
क्याचेरीन र क्रिश्चियन डचेमिनले १v 1984 the मा क्याल्भाडोस डिपार्टमेन्ट टुरभिल-सुर-ओडोनमा स्थापना गरेको डचेमिन, ला फर्मे डु भल डि ओडोन भन्ने ब्रान्डको नामले बेच्ने आलुहरूमा माहिर छ। गुइलाउम डचेमिन १ business बर्ष अघि पारिवारिक व्यवसायमा सामेल भए र आज उनी कम्पनी चलाउँछन्। श्री Duchaman सॉर्टर को उपयोग को आफ्नो प्रभाव साझा TOMRA A ए, जुन विगत दुई बर्षमा कम्पनीको उत्पादन प्रक्रियालाई अनुकूलित गर्न महत्वपूर्ण उपकरण रहेको छ।
क्रान्तिकारी मल्टिस्पेक्ट्रल टेक्नोलोजी र पल्स एलईडी, स्थापनाको लागि धन्यवाद TOMRA A ए ठीक प्रकारको उपकरण हो जुन महत्वाकांक्षी व्यवसायलाई दक्षता र नाफा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। डचेमिनले आलु गोदाममा आफ्नो मेशीन जडान गरेको छ, जहाँ ट्र्याक्टरहरूले क्षेत्रबाट ल्याइएको आलुहरू उतार्दछन् र जहाँ बोटले प्रभावशाली क्षमतामा काम गर्दछ - प्रति घण्टा औसत tons० टन। मेसिनले दोस्रो वर्षको लागि पूर्ण क्षमतामा काम गरिरहेको छ र यो उत्तम प्रमाण हो कि यसमा पछ्याइएको अभिनव दृष्टिकोण TOMRA Food, र Duchemin मा, यो वास्तवमै काम गर्दछ र वास्तविक परिणाम दिन्छ।
टेक्नोलोजीलाई ग्राहकको आवश्यकता अनुसार अनुकूलन गर्न साझेदारी
आलु भण्डारण सुविधामा बिरूवा प्रयोग गर्ने दुई उत्पादन मौसम पछि, डचेमिनले सहयोगबाट थप फाइदा भएको पाए। TOMRA Food.
Duchemin विश्वस्त छ कि निरन्तर आत्म-सुधार सफलताको कुञ्जी हो। यो एउटा कारण हो किन कम्पनीमा पाँच-सदस्य गुणस्तर स्थापना भएको थियो। उसको कामले कामको भार घटाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र नयाँ व्यापार अवसरहरू पहिचान गर्नेमा केन्द्रित छ। २०१ 2017 मा, डचेमिनलाई प्रोटोटाइपको परीक्षणको लागि विश्वको पहिलो उद्यम बन्न आमन्त्रित गरियो TOMRA 3A, एक नयाँ पीढ़ी स्क्रीनिंग प्लान्ट। कम्पनीको प्रतिक्रिया बनाउन सहयोग गरियो TOMRA 3A सुपर कुशल मशीन। सेप्टेम्बर २०१ In मा, यो समाधानको दायराको हिस्सा भयो TOMRA Food.
गुइलाउम डुचमन्त वर्णन गर्दछन्: “हामी मूल्यवान् छौं TOMRA Food तिनीहरूको ग्राहक फोकस को लागी। हामीले उत्पादनलाई मेसिनमा अनुकूलन गर्नुपर्दैन, यसको विपरित, मेसिनले हाम्रा उत्पादनहरूमा अनुकूलित गर्यो। यो धेरै रचनात्मक दृष्टिकोण हो!
ग्रगोइयर भोल्पेट, बिक्री प्रबन्धक TOMRA Food फ्रान्समा, थप्छ: “हाम्रो नवीन प्रविधिको पूर्णतया ग्राहकको सन्तुष्टिमा केन्द्रित छ। नयाँ मेशिनको विकास गर्दा, हामीले हाम्रो एकाई परीक्षण गर्ने मौका पाउने ग्राहकबाट आएको प्रतिक्रियालाई राम्ररी सुनेका थियौं। ”
वर्कलोड घटाइयो, उत्पादकता बढ्यो
गुइलाउम डुचमान: "TOMRA A ए एक धेरै कम्प्याक्ट मेसिन हो जुन उत्पादन लाइनमा सजिलैसँग माटो विभाजकको आउटलेटमा र प्यालेट प्याकिंग चरण अघि स्थापना गर्न सकिन्छ। उपकरणहरू मजबूत र भरपर्दो छ, र एक खराबीको स्थितिमा उत्कृष्ट बिक्री पछि सेवा प्रस्ताव गरिन्छ। "
मिसिन TOMRA A एले कन्दको पतन हुने विश्लेषण गर्दछ र ढु material्गा, माटोको डल्ला, काठ र दोषयुक्त (हरियो) जरा जस्ता उत्पादनहरूलाई उत्पादन रेखामा सार्छ। स्थापना TOMRA 3A धेरै उत्पादनको लागि कुनै क्षति विना नै धेरै उच्च वेगमा अपरेट गर्न डिजाइन गरिएको छ। डचेमिनमा, यस मेसिनले सबै पाक अनुप्रयोगहरू जस्तै कडा सेतो लुका, कडा रातो लुगाहरू र आलु चिप प्रजातिहरूको लागि साना र ठूला दुवै 30० किसिमका आलुहरू सम्हाल्न सक्छ।
सेटिङ TOMRA 3A धेरै उत्पादनको लागि कुनै क्षति विना नै धेरै उच्च वेगमा अपरेट गर्न डिजाइन गरिएको छ। डचेमिनमा, यस मेसिनले सबै पाक अनुप्रयोगहरू जस्तै कडा सेतो लुका, कडा रातो लुगाहरू र आलु चिप प्रजातिहरूको लागि साना र ठूला दुवै 30० किसिमका आलुहरू सम्हाल्न सक्छ।
गुइलाउम डुचमन्तले टिप्पणी गरे: “आज बिहान हामीले डेलिभर गरिएको आलु ढुवानीमा बलात्कारको वृद्धि भेट्टायौं, जसलाई हटाउन आवश्यक छ, किनभने यो फ्रिजमा दूषित हुने स्रोत हुन सक्छ - यो ठूलो जोखिम हो र हामी यसलाई अनुमति दिन सक्दैनौं। अघि, हामीले कार स्थापना गर्नु अघि TOMRA A ए, हामीले क्रमबद्ध गर्नका लागि दुई थप स्टाफ बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ। यो अब आवश्यक छैन किनकि मेशिनले सबै काम गर्दछ। यसबाहेक, गति सँधै उही रहन्छ। विगतमा, हामी केहि आलु प्रजातिहरूको कन्टेनर क्रमबद्ध गर्दा डेढ घण्टा खर्च गर्न सक्दछौं TOMRA A ए minutes3मिनेट पर्याप्त छ। क्रमबद्ध गर्ने मेसिनले कामको भार कम गर्न सक्छ। कम्पनी अझै चार व्यक्ति छँटाई गर्ने कन्वेयर लाई काम गर्न को लागी काम गर्दछ, तर तिनीहरूको कामको बोझ कम भएको छ, जसको मतलब हो कि उनीहरु काममा ध्यान दिन अझ सक्षम छन्। "
उत्तम रोकथाम मर्मत
गुइलाउम डुचमान: "TOMRA A ए एक धेरै कम्प्याक्ट मेसिन हो जुन उत्पादन लाइन मा माटो विभाजकको आउटलेटमा र प्यालेट प्याकिंग चरण अघि स्थापना गर्न सजिलो छ। उपकरणहरू मजबूत र भरपर्दो छ, र एक उत्कृष्ट बिक्री पछि सेवा एक खराबी को घटना मा प्रस्तुत गरीन्छ। यो महत्वपूर्ण छ: जब मेशिन एक घण्टाको लागि रोकिन्छ, २ people व्यक्तिहरू स्थिर रहनु पर्छ, मेसिन पुनः सुरु हुन पर्खिनु पर्दछ, तर कम्पनीको बिक्री पछि सेवा TOMRA Food अनुरोधहरूमा चाँडै प्रतिक्रिया गर्दछ र समस्याहरू समाधान गर्दछ। हामी शान्त छौं, किनभने TOMRA नियमित र अग्रिम रूपमा रोकथाम मर्मत सम्झौताको नवीकरण गर्न प्रस्ताव गर्दछ। प्राविधिक उपकरणहरू सर्वोपरि महत्त्वको हुने भएकोले यसलाई व्यवस्थित रुपमा मेन्टेन गरिनु पर्छ। "
सटीक र उपयोगी तथ्या .्कहरू
TOMRA 3A डचेमिनलाई सही सामग्री रेकर्ड राख्न मद्दत गर्दछ। सफ्टवेयर प्लेटफर्म द्वारा संचालित TOMRA ACT, यस क्रमबद्ध मेशिनले पूर्ण प्रक्रियाहरूमा अत्यन्त सटीक तथ्या .्कहरू संकलन गर्छ, ग्राफिक्स द्वारा चित्रण जुन वास्तविक समयमा टचस्क्रीनमा गतिशील रूपमा प्रदर्शित हुन्छन्। भविष्यमा, यस उपकरणले निर्माणकर्ताहरूलाई अनुमति दिनेछ, यदि चाहिएको हो भने, उनीहरूको ग्राहकले टेक्नोलोजिकल चेनको पहिलेका चरणहरू सम्बन्धित डाटा प्राप्त गर्न सक्दछन्।
गुइलाउम डुचमन्त वर्णन गर्दछन्: “हामी आफ्नै क्षेत्रबाट वा हाम्रो पार्टनर उत्पादकहरूको आलुबाट आलुहरू प्रशोधन गर्छौं। म पाँच आकार कोटिहरू भएको उत्पादनहरूको ब्याच प्राप्त गर्न सक्दछु। एक ग्रेड भित्र, त्यहाँ सात आकार कोटिहरू हुन सक्छ, निर्भरतामा दुबै खरीद र बिक्री मूल्य तोकिन्छ। मैले मेरो निर्माण साझेदारहरूलाई यो प्रदर्शन गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। मेरो आपूर्तिकर्ताहरूले स्थायी र भरोसा सम्बन्धहरू सुनिश्चित गर्न सटीक रिपोर्टहरू प्राप्त गर्छन्। हामी २ manufacturers निर्माणकर्ताहरूसँग काम गर्छौं जुन धेरै वर्षदेखि हामीप्रति वफादार रहे, र यो भाग्य मात्र होइन! मूल्य श्रृंखलाको अन्त्यमा, हामीले यो सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ कि हाम्रा ग्राहकहरू - ठूला खुद्रा विक्रेताहरू भेटिएका छन्। हाम्रो सुविधाले हाम्रा ग्राहक गुणस्तर व्यवस्थापकहरू र बाह्य संस्थाहरू द्वारा प्रति वर्ष १२ लेखा परीक्षण गर्दछ। TOMRA 3A ले तपाईंलाई यी व्यावसायिक आवश्यकताहरू अनुकूल गर्न अनुमति दिन्छ। "
डचेमिन: केही तथ्या and्क र तथ्यहरू
२०१ season को मौसममा आलु 2019० हेक्टरमा रोपिएको थियो, जसबाट १ 550,००० टन फसल काटियो। कम्पनीले जैविक, परम्परागत र कृषि-पारिस्थितिक खेती विधिहरू प्रयोग गर्दछ। कम्पनीले full० पूर्ण-समय कर्मचारीहरू नियुक्त गर्दछ, चरम फसल मौसममा थप employees० जना कामदारहरूलाई काममा लगाएको। यस अवधिमा, आलु भण्डारण केन्द्र दिनको १ to देखि १ hours घण्टा सम्म खुला रहन्छ। कम्पनीले varieties० प्रकार र पाँच आकार कोटिहरू प्रशोधन गर्दछ र फसलको समयमा १ vehicles०,००० किलोमिटर कभर हुने १ vehicles सवारी साधन (ट्रक र ट्र्याक्टरहरू) को संचालन गर्दछ।
तपाइँ वेबसाइटमा अधिक जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ: www.lafermeduvaldodon.com.
टैग: TOMRA Foodक्रमबद्ध मेशिनहरू
कृषि कामगारका दिन बधाई छ!